Nooc A fudud oo kaa caawinaya inaad ku qoraan boodhka weyn ee блог публикация
Home » Копиране на писане
09.05.2020 Category: Копиране на писане
Sida laga soo xigtay WordPress, laga Bilaabo 14 март 2014 г., waxaa jiray goobo 76,774,818 WordPress oo adduunka ах. Intaa waxaa dheer, кува блогове, waxaa jira kuwa deggan degaannada kala duwan ama xal loo helo sida Blogger.com. Waxaa ka sii muhiimsan sida blogsku u jiro, intee in le’eg ayey dadku akhriyaan buugaagta.
Warbixintan isla, WordPress ayaa sheegay в:
"In ka badan 409 milyan oo qof fiiri in ka badan Xogta bilyan ee 13.1 bil kasta.
Sawir laga soo qaaday WordPress.com
Iyada oo noocyada noocan oo kale ах, waa inay fududdahay inay aqriso akhristayaasha bloggaaga, sax?
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr waxyaabood oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u soo jiidato akhristayaashaas oo mid ka mid ah waxyaabahaas ayaa ah iaad si joogto ah u bixiso waxyaabaha taad kaad kaob. Haddii akhristaha uu ogyahay inay ku tirakoobi karto maqaal cusub maalin kasta bartaada internetka, markaa waxay u badan tahay inay soo booqdaan bartaada maalin kasta.
Waa xaalad qabasho-22
Dhibaatadu waxay ka imaaneysaa milkiilayaasha websaydhada mashquulka ах, kuwaas oo badanaa socodsiiya восък ka badan hal bog, iskudayaya inay ganacsi sii wadaan oo laga yaabo inay xitaa ka shaqeeyaan shaqo banka Waqtigaas kama baxo waqti badan oo lagu qoro qoraallada mareegaha. Waa xaalad qabasho-22.
Qoraallo badan oo блог ах = akhristayaal badan
Akhristayaal badan = wakhti yar
Waqti ka yar = maqaal yar oo блог ах
1 Блогъри ayaa noqday iyo sidoo kale waa inuu блогъри
2 Блог на Qoraalka Mawduuca
3 Шаблон на Джебинта Кайбаха
3.1 Madaxa weyn
3.3 Qeybta 2 ee Boostadaada
3.4 Qeybta 3 ee Boostadaada
3.5 Вашият Гунаанад
4 Блог Qiyaamo laakiin ma jugleeyo
Блогъри ayaa noqday iyo sidoo kale waa inuu блогъри
Кредит за снимка: ~ Afrodity
Blogging-gu markii ugu horreysay wuxuu caan ku ahaa ’90s’. Ardayda, hooyooyinka iyo caado-maalmeedku waxay bilaabeen inay qoraalo geliyaan waxkasta oo ay ka bilaabaan iskudayada cuntada sida buugga illaa sida loo quudiyo qoyskaaga восък ka hooseeya $ 50 tdodobaadki. Sida waxyaabo badan oo ku xiran internetka, haddii ay fikrad fiican tahay, waxay kortaa oo ay u fidaa oo moodeysaa waxyaabo cusub oo xiiso badan. Labaatankii sano ee la soo dhaafay, baloog garaynta ayaa waxyar iska beddelay.
Maanta, blogging waxaa loo arkaa inay tahay daruuri ganacsiyada intooda badan iyo habka lagu gaari karo akhristayaasha iyo macaamiisha. Iyada oo tartan aad u badan iyo блогове badan oo halkaas ka baxsan, waxaa ka muhiimsan inta badan bloggers leeyihiin niche gaar ah iyo cod xooggan. Qof kastaa wuxuu qori karaa maqaal wuxuuna ku dhejin karaa blog, laakiin boostada ayaa la akhrin karaa, waqtigeeda iyo caawinaad leh akhristayaasha? Miyuu ka sii gudbi karaa meelaha kale ee maqaarka?
Блогъри Waa in ay isbeddelaan iyagoo bixinaya nuxur wanaagsan, content aan laga helin meelo kale oo si degdeg ah oo joogto ah u siiya. Tani waxay u egtahay hawl la yaab leh, laakiin haysashada shaan si aad ugu qorto ayaa kaa caawin karta. Foomka hoos ku qoran waa mid ka mid ah inaad nuqul ka dhigi karto oo aad horay u soo gashey dashboardkaaga WordPress oo aad u soo qori kartid. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sidoo kale burburin doonaa walxo kasta si aan kuu caawino inaadan si dhakhso ah u qorin, laakiin qor si wax ku ool ah si akhristayaashaada aysan u jeclayn kaliya maqaashaada waatoto laaki.
Sida laga soo xigtay Ka feker suuq-geynta IQ Blog, ganacsiyada balooggu ku dhex arki karo ‘126% jiilka hogaamiyaha ah oo ka badan ganacsiyada aan arki karin. Ku dar intaas xisaabta taas Content Plus la ogaaday taas oo muujineysa in 60% dadku ay dareemaan kalsooni badan xagga ganacsiga ka dib markii ay akhriyaan waxyaabo u gaar ah boggaas ‘ganacsiga’ runtiina ma lihi way waa bada aaaaaii waad wax bada rabto inaad meheraddaada ka hesho ilaha khadka tooska ах.
Блог на Qoraalka Mawduuca
Ka taxjignaan таксадар
Akhri akhristaha leh fur furan
Soo koob sababta aad u dabooleysid mowduucan oo u gudbi mowduuca akhristaha
Sheeg waxa aad ka hadli doontid qormadan
Qaybta Labaad ee Boostadaada
Waxa ay dadka kale sameeyeen
Qaybta Saddexaad ee Boostadaada
Qalabyada iyo farsamooyinka si ay u caawiyaan akhristaha (sida template this, infographic, iwm)
Tani waa inay ka baxaan wixii ka baxsan iyo wixii ka baxsan wixii qof kale ka baxa
Ka akhri akhristaha feker kama dambays ах
Wicitaanka suurtagalka ах ee ficilka (CTA)
Qalabka macquulka ах ee loogu talagalay maqaalkan soo socda
Шаблон на Джебинта Кайбаха
Кредит за снимка: Ранди Стюарт
Cinwaankaaga waa mid ka mid ah qeybaha ugu muhiimsan ee boostadaada blog. Haddii aad u baahato inaad waqti dheeraad ah ku qaadatid waxyaabo, abuurista cinwaan gaar ah waa meel fiican oo wakhtigaas la qaato. Si kastaba ha noqotee, xitaa marka ay timaaddo cinwaanno waaweyn, waxaa jira talooyin qaar kaa caawin kara inaad la timaadid mid indho-qabasho ах oo aan si buuxda dib-u-furin gawaarida.
Jerry Low ayaa ku qoray mawduucyada cinwaannada kale ee A-Bood-bixiyeyaasha ayaa abuuray. Wuxuu bixiyaa tusaalooyin 35 ah oo cinwaanno aad u fiican ah kuwaas oo ku dhaca dareenka akhristaha. Erayada qaarkood ee kugu dhaadhicin kara akhristaha inuu booqdo bartaada oo uu akhriyo maqaalkaaga waxaa ka mid ah:
Xiddooyinka sare ee 10 (ama isticmaal lambar kale) illaa ______________ (buuxi mawduucaaga mawduucaaga)
Qorshaha fudud ee ______________ (buuxi mawduucaaga mawduucaaga)
Qalad ha Sameyn ______________ (ku buuxi maran mawduucaaga)
Ka gudub ______________ (buuxi mawduucaaga mawduucaaga)
Sidee loo helaa qadar dheeraad ah ______________ (buuxi mawduucaaga mawduucaaga)
Waxaad helaysaa fikradda. Waxaad dooneysaa inaad ku qanciso akhristaha. Waxaad haysataa illaa saddex ilbiriqsi si aad uhesho dareenkiisa iyada oo malaayiin kale oo блог ах ay meesha ka baxayaan. Cinwaankaagu wuxuu si dhab ah u tirinayaa.
Hordhaca ayaa ах fursadaada inaad akhriska ku soo jiiddo boostada. Калоена кожа с козина Тани ваа вакса "ку xiraya" akhristahaaga doonaya inuu akhriyo maqaalka inteeda кале. Waxaad dooneysaa isaga inuu dareemo inuusan ka fogaaneynin waxa aad qoreyso maxaa yeelay waxaa jira wax intaas ka badan oo kaliya geeska.
Waxaa jiray buugaag ku qoran xariiqda furitaanka. Haddii aad barato waxa ka baxsan, waad arki doontaa waxa aan ula jeedo. Buugag, maqaallo, gogo ‘wargeysyo… dhammaantood waxay leeyihiin furitaanno furan. Waxaa jira qaabab badan oo aad ula qabsan karto xiisaha akhristaha.
Qodobbo xiiso leh
Tirakoob bilowga ах (waa sida aan u furay qodobkan gaarka ах)
Xaqiiqda ах в akhristuhu uusan ogeyn
Su’aal ах в akhristaha uu ku fekerayo ama wax su’aalaayo
Marka ugu horeysa, waxaa laga yaabaa in ay caqabad ku noqoto inaad soo qaadato wax xariif ах oo восък akhriya, laakiin badanaa aad ku tababarto waxa fududaanaya inaad ku qorto xariiq furan oo dhalaalaya.
Hordhacdu waa inay sidoo kale akhristaha u ogeysiisaa waxa aad ka hadli doontid qormadan. Xusuusnow inaad rabto inaad ku sasabto iyada si ay u aqriso inta ka hartay, markaa sii quus. Tusaale ahaan: Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa sida loo qoro boostada barta internetka qaab caano fudud oo kaa badbaadin doonta waqti iyo dadaal.
Qeybta 2 ee Boostadaada
Кредит за снимка: kenteegardin
Hadda waxaa la joogaa waqtigii la geli lahaa cilmi baaristaas ama aqoon gaar ah oo aad akhriska ka siin kartaan. Haddii aad qoreyso sida loo doorto naadiga golf-ka saxda ah oo aad liis golfer ku leedahay liistada saaxiibkaaga, waxaad ka heli kartaa talooyin dhowr ах isaga oo ku dar kuwaas qeybtan.
Haddii aadan lahayn aqoon gaar ах, laakiin aad si fudud u ogaatid mowduuca sifiican, waxaad soo saari kartaa xoogaa tirakoobyo iyo xaqiiqooyin ah ka dibna falanqayn ku samee. Ma jiro qof dunida ka socda oo arrimaha u fiiriya sida aad u eg tahay. Qofna kuma soo aragin khibradahaaga ama "куулама хадло" qaab la mid ah kan adiga oo kale ах. Tan ayaa u iftiimin doonta qoraalkaaga. Ха ка baqin inaad shaqsi ahaan ф aqrisato akhristayaashaada OO ПАД ла wadaagto macluumaadka waqtigaas UU aabihii Isku dayay inuu hagaajiyo jikada OO ку dhaweyd inuu ку qarxiyo guriga maxaa yeelay wuxuu ilaaway inuu damiyaa gaaska gaaska. Akhristayaasha, gaar ahaan akhristayaasha barta internetka, waxay jecel yihiin taabashada shakhsi ahaaneed. Waa waxa ka dhigaya blogging inay si xiiso leh noo soo jiitaan. Waa dariiqo laguula xiriiri karo heer kale oo lala gaaro dadka aduunka oo dhan.
Qeybta 3 ee Boostadaada
Qeybtaan, waa inaad u bandhigta aqristaha aalado gaar ah ama macluumaad. Waxay u fududaan laheyd sida muunad ka dibna sharax ka bixinaysa sida loo adeegsado shaxankaas sida aan ku sameeyay maqaalkaan. Waxay kaloo noqon kartaa:
Fiidiyowga la dhigo
Sidoo kale, в kasta oo aan ugu yeedho ‘Qaybta 3’, haddii aad u baahan tahay meel dheeri ah, waxaad xaqiiqdii qayb uga noqon kartaa qaybo kala duwan ama hoosaadyo kala duwan. In kasta oo aad ku deg degsan tahay in qoraalladaada la qoro oo aad rabto inaad waqti badbaadiso, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad cinwaan ka dhigto gebi ahaanba. Hubso inaad dabooashay xagal kasta. Samee raadis Google ah oo deg deg ah si aad u aragto haddii boggag kale ay soo bandhigayaan isla mowduuca oo ogaadaan waxaad bixin karto taas oo ka badan waxa ay bixiyaan.
Кредит за снимка: Крис Олин
Gunaanadku waa fursadda ugu dambeysa ee aad u baahan tahay inaad la hadasho akhristahaaga. Waxaad rabtaa wixii aad sheegtay inaad ku dhejiso. Ganacsiyada qaarkood waxay u isticmaalaan aagtan sidii wacitaan ficil (CTA). Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay sheegaan haddii akhristaha uu u baahan yahay caawinaad dheeri ah oo ku saabsan qalabka jikada inuu jiro wadatashi bilaash ah la lali karo adigoo gujinaya batoonka midigig. В kasta oo ay tani waxtar yeelan karto, akhristayaashu waa caqli badan yihiin. Начин ogyihiin inaad ugu yeedhayso ficil oo опит dayeyso inaad wax ka iibiso.
Maskaxdaa ku haya, ha ka cabsan inaad mararka qaar dulucda mawduuca oo aad ku dhiirigeliso akhristaha inuu horay ugu socdo qorshahooda cusboonaysiinta (ama wax kasta oo mawduuca aad ku qoreyso). Waxaan horay u lahaa akhristayaal farriin ii soo dirto oo aan uga mahadceliyo sida aan had iyo jeer опита dayo inaan iyaga wax ka iibiyo ama aan wax ku riixo Hungurigooda. Tani waxay dhisi kartaa kalsoonida waqti ka dib akhristayaasha. Хаа, CTA mararka qaarkood waa mid wax ku ool ах. Taladaydu waa inaan kala duwanaado. Adeegso CTA mararka qaar iyo wakhtiyada kale uun ku duub qodobka una ogolow akhristaha inuu go’aansado inuu doonayo inuu ficil qaado. Badhanka midigta ayaa wali jiraya. Xaqiiqdii ma noqon doontid inaad iskaa u horumarisid.
Блог Qiyaamo laakiin ma jugleeyo
Waqtigu waa qodobka milkiilaha ganacsiga / blogger kasta oo halkaa ka jira. In kasta oo naqshada kor ku xusan ay kaa caawin karto inaad qorsheyso qoraaladaada oo ay kugu ilaaliso adoo hubinaya inaad daboosho dhammaan qodobbada muhiimka ah, ma aha inay ku beddesho nuqul adag boggaaga.
Google wuxuu raad ku leeyahay tayada marka uu sito boggagaaga, sidaas darteed xayeysiinta macluumaadka adigoon ku taageerin xaqiiqooyinka ama faahfaahinta gaarka ah waxay kaliya dhaawici doonaan blogkaaga mudada dhakaerkakaga mudada dheaka mudkaerhega mudada. Блог degdeg ах, блог smart, tayada блог.
Nooc A fudud oo kaa caawinaya inaad ku qoraan boodhka weyn ee博客文章
Sida laga soo xigtay WordPress，laga bilaabo Maarso 14，2014，waxaa jiray goobo 76,774,818 WordPress oo adduunka
Sida Laga Soo Xigtay WordPress, Laga Bilaabo Maarso 14, 2014, Waxaa Jiray Goobo 76.774.818
Sida laga soodsad WordPress, laga bilaabo Maarso 14, 2014, waxaa jiray goobo 76 774
Sida laga soo xigtay WordPress, laga bilaabo Maarso 14, 2014, waxaa jiray goobo 76,774,818
Dit is so dat WordPress aangestel is, maar 14 Maart 2014, dit is die
Du kan også bruge WordPress, men også 14. marts 2014, og derefter gobe 76.774.818
Blogunuz üçün hansı e-poçt bülleteni xidməti ən yaxşısıdır?
7 xarxes socials inusuals (però potents) per a blocaires independents
Jak napravit problémy s omezením paměti PHP ve WordPressu
12 начина да разберете аудиторията си (и да доставите звездно съдържание)
Sådan opretter du et fotograferingssted ved hjælp af WordPress: Temaer, værktøjer og hosting, du har brug for
Part Time Mom Blogger olaraq ildə 10.000 $ qazanmaq necə
Miks jutuvestmine on ajaveebi oluline osa